Invitation for Public Consultation Meeting of Environment and Soc ial Management Framework (ESMF) in Naypyitaw | Community Driven Development Project
The Department of Rural Development (DRD), jointly with the World Bank Group conducted Public Consultations around the draft Environment and Social Management Framework (ESMF) for the additional financing of the Myanmar National Community Driven Development Project (NCDDP) in Yangon, Mandalay and Naypyitaw during February, 2015.
In accordance with the Operational Policy (OP: 4.11) which is Physical Cultural Heritage including Environmental and Social Assessment Policy,adraft ESMF was updated to explain the environmental and social assessment processes and related safeguard policies to be followed for investments financed under the NCDD Project since there are three nationally cultural heritage townships – Kyauktan, Nyaung-U and Ngathogyi among current 47 CDD townships which are being implemented. And then, rules and regulations which have been enacted by the Department of Archeological National Museum and Library under the Ministry of Religious Affairs and Culture were considered in updating this ESMF (Draft) in order to implement project activities smoothly.
The ESMF providesageneral options impact analysis with environmental and social criteria and an overall assessment on how to mitigate and monitor possible environmental and social effects associated with the project. In accordance with our practice, there would be two public consultation meetings in Yangon and Mandalay last week of May, 2017.
For Naypyitaw’s consultation meeting for ESMF (draft), we are inviting concerned officials under Department of Environmental Conservation, Ministry of Religious Affairs and Culture and Development Organizations to participate inadiscussion around the draft ESMF and to seek your views and inputs.
Therefore, ESMF (Draft) Public Consultation Meeting will be held at MICC (2), Delegate (1) which is situated in Naypyitaw on 1st June, 2017 from 9.00 AM to 11.00 AM. So, we would like to invite you to participate inadiscussion around the ESMF (Draft) and to seek your views and inputs.
So, kindly confirm your participation to cdd.drdmyanmar@gmail.com (Phone Number: 067-409413) by 25th May, 2017.
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်းနှင့် လူမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု မူဘောင်အတွက် အကြံဥာဏ် ရယူခြင်း အစည်းအဝေး အခမ်းအနား ဖိတ်ကြားလွှာ
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်တို့ ပူးပေါင်း၍ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (CDD) ကို တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်ရန်ပုံငွေ ထပ်မံချထားရာတွင် အသုံးပြုမည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်းနှင့် လူမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမူ မူဘောင် မူကြမ်း ( the draft of Environment and Social Management Framework-ESMF) နှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ် ရယူခြင်း အခမ်းအနားများကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလပိုင်း အတွင်း ရန်ကုန်၊ မန္တလေး နှင့် နေပြည်တော်တို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဤ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု မူဘောင် မူကြမ်းကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (CDD) တွင် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် မြို့နယ်များထဲမှ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု နယ်မြေများဖြစ်သည့် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကျောက်တန်းမြို့နယ်တို့ ပါဝင် လာ၍ လက်ရှိ လိုက်နာကျင့်သုံးနေသော (ESMF) အား ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပက်သက်၍ ကျင့်သုံးရမည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှု ဆန်းစစ်ချက် မှုဝါဒများ ပါဝင်သော ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ Operational policy (OP:4.11) အတိုင်း ဖြည့်စွက်ပြုပြင် ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ၄င်းအပြင် ပြုပြင်ပြီး ESMF (မူကြမ်း)တွင် သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရှေးဟောင်းသုသေတနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက် ဦးစီးဌာန မှ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပက်သက်၍ ထုတ်ပြန်ထားသည့် လိုက်နာရမည့် ဥပဒေ၊ နည်းပညာများ နှင့်အညီ ကိုက်ညီစွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး လိုက်နာရမည့် အချက်အလက်၊ နည်းလမ်းများကိုလည်း ပြုစု၍ ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားပါသည်။
ဤသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု မူဘောင် မူကြမ်းတွင် စီမံကိန်း၏ အထွေထွေ သက်ရောက်/ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ချက်များ၊ သတ်မှတ်ချက်များ နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့် အညီ ဖြစ်စေရန် အတွက် (ESMF) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု မူဘောင် မူကြမ်း အပေါ် ပါဝင် ဆွေးနွေးနိုင်ရေး ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ အကြံဥာဏ် ရယူခြင်း အခမ်းအနားများကို ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတို့၌ မေလပိုင်းအတွင်း အပြီး ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ သာဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဌာနနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများအပြင် ဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖတ် အဖွဲ့အစည်းများ အား တက်ရောက် ဆွေးနွေးနိုင်ပါရန် ဖိတ်ကြားသွားမည်ဖြစ်သည်။
MICC (2)၊ Delegate (1)၊ Naypyitaw တွင် ESMF (မူကြမ်း) နှင့် ပက်သက်၍ အကြံဥာဏ်ရယူခြင်း အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင် နံနက် (၉:၀၀) နာရီ မှ (၁၁:၀၀) နာရီထိ ကျင်ပပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်ဖြင့် တက်ရောက် ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
အစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန် စိတ်ပါ ဝင်စားမှု ရှိပါက cdd.drdmyanmar@gmail.com သို့ လည်းကောင်း၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၀၉၄၁၃ သို့ လည်းကောင်း မေလ ၂၅ ရက်ထက် နောက်မကျပဲ ဆက်သွယ် အကြောင်း ကြားပေးပါရန်